Lafa-gur Sharci : Lafa-Gur Sharci oo la Xidhiidha Qaraarka Maxkamadda Sare ay ka soo saartey Khilaafka u dhaxeeya Dugsiyada Gaarka loo leeyahey iyo Wasaarada Waxbarashada & Sayniska oo Lagu Muransanaa. | ToggaHerer
← Khudbad Sheekh Dirir kaga hadlay musuqmaasuqa iyo sida looga tawban keeni karo xatooyada xoolaha ummadda
Sirta Fartii Masaaridii Hore (Hieroglyphic) & Af-Soomaaliga Prof. Maxamed Siciid Gees – Qaybtii 2aad London (UK) →
Lafa-gur Sharci : Lafa-Gur Sharci oo la Xidhiidha Qaraarka Maxkamadda Sare ay ka soo saartey Khilaafka u dhaxeeya Dugsiyada Gaarka loo leeyahey iyo Wasaarada Waxbarashada & Sayniska oo Lagu Muransanaa.
Published on November 1, 2019 by Magan
1.	Qaraarkani ma yahey mid sharciga waafaqsan mise waa mid iska hor imanaya?
2.	Qaraarkan Maxkamada sare ma sameeyey tafsiir sharci oo ma ka jawaabayaa Xeerka Guud iyo xeer nidaamiyaha inay is khilaafsan yihiin iyo inay is waafaqsan yihiin iyo qodobada ka hor imanaya xeerka guud
1.	Ugu horeyn, waxaan kala cadeyn in Gudida Dugsiyada Gaarka loo leeyahey cida lagu sheegayo ay Maxkamadda Sare Qaybteeda Idaariga u soo Gudbiyeen arji cabasho amase uu ahaa Arji dacwad furasho, sababtoo ah Qaraarka Maamul ee Maxkamadda sare waxa is dhex socda oo ka wada muuqda in meelaha qaarna ay ku sheegayso arji cabasho sida ku qoran asbaabta ugu horeysa ee qaraarka, isla markaana ay meelo kale ku sheegeyso arjiga dacwad furasho sida ka muuqata farqada 1-aad ee Go’aanka Qaraarka Maamulka ee dacwad Furashada.
2.	Maxkamaddu waxaad mooda iney aqoonsatey Gudi Dugsiyada Gaarka loo leeyahey “waxa is weydiin leh” ma jirtaa dalad ay ku midoobeen Dugsiyada Gaarka loo leeyahey, oo Gudidan siineysa jiritaan sharci[legal Entity], jawaabta oo kooban waa Maya.
3.	Nuxurka arjiga ama cabasho noocu doonaba ha ahaade ee ay soo gudbisteen cidan lagu sheegayo Gudida Dugsiyada Gaarka loo leeyahey waxa ku xusan ee ay ka cabanayaan waa laba arimood:
a)	Xeer Nidaamiyaha waxbarashada Gaarka ah – (ref moe/s/01/186/18, soo baxey 30/11/2018)
b)	Go’aan Maamul oo ka soo baxey Wasaarada Waxbarashada iyo Sayniska ee tirsigiisu yahey PSc/22/09/2019, ee ku taariikhaysan 15/10/2019.
4.	Waxa kale oo is khilaafsan iney Maxkamadu Qaraariso in Go’aankana wasaarada loo daayey wax ka qabashadiisa, halka xeer nidaamiyahana dib ha loo eego la farayo Wasaarada iyadoo lagu ciladeynayo inuu khilaafsanyahey Xeerka Waxbarashada waa laba arimood oo iska hor imanaya, madama go’aanka qayb ka mid ahi Xeer Nidaamiyaha ku dhisantahey. Oo uu leeyahehey “Dugsiga ruqsada sanadlaha ah diida, imtixaanada shahaadiga ah ayaa laga joojin isla markaana ruqsadana dugsina waa laga laali!.
5.	waxa kale oo arin lala yaabo ah, in Maxkamadda Sare ay Qaraarisey iney Diidey Arjiga dacwad furashada ee ay soo gudbisteen Gudida Dugsiyada Gaarka loo leeyahey. Halka ay ka raacisey hadana iney qayb ahaan ogaalatey cabashadooda. Taa macnaheedu waxa ay tahey inay is khilaafsan yihiin farqada 1aad iyo farqadaha 2aad iyo 3aad ee isla go’aanka Qaraarka Maamul ee Maxkamaddu.
6.	Waxa intaa dheer Go’aanka Qaraarka Maxkamaddu dhinac wuxuu dalbanayey u xukuntey, Madaama loo xukumey in Xeernidaamiyihi ay lahaayeen ma waafaqsan Xeerka Waxbarashada lagu raacey. Hadana ay Maxkamaddu ka dhigeyso dacwad ay diidey arjigooda. Hadii aynu si kooban u eegno ujeedada dacwadd furashada ee ay lahayeen Gudidaas lagu sheegay Dugsiyada Gaarka ah waxey aheyd in xeer nidaamiyaha laga dhigo mid khilaafsan Xeerka Waxbarashada. sidaas darteed Go’aanka Maxkamaddu wuxuu ka dhigan yahey arjigii dacwaddana waan kaa diidey hadaad Gudidaas tihiin, waxaad rabteena waan idin xukumey .
7.	Waxa kale oo xusid mudan inaaney cadeyn Qodobadda dib u eegista u baahan ee ku jira Xeer-Nidaamayaha ee ay Maxkamaddu go’aamisey iney ka hor imanayaan Xeerka Waxbarashada iyo sababta loogu aqoonsadey qodobadaas iney ka hor imanayan Xeerka Waxbarashada;
8.	Sidoo kale waxa khaldan qaar ka mid ah Qodobada loo adeegsadey Qaraarka, oo uu ugu horeeyo Qodobka 159XHM, oo ka hadlaya in Garsooruhu weydiinayo qoraalada been ee dhinac soo gudbisto inuu ku adkeysanayo in dacwadiisa uu u isticmaalayo iyo inuu ka tanaasulayo oo laga saaro cadeymaha uu soo gudbistey. Waxa arin lala yaabo ah sababta ay Maxkamaddu ugu adeegsatey qodobkan oo kale Qaraarkeeda?
9.	Waxa kale oo xusid mudan in Gudoomiyaha Maxkamadda sare u ku lifaaqey Qaraarkan Maamul warqad uu faafinayo oo ujeedeeda uu ka dhigey Gudbin Qaraar Maamul. Warqadaas uu ku lifaaqey oo sharciyan meel ay ka waafaqsantahey aaney jirin, oo Qaraarada ka soo baxa Maxkamaddaha Guud ahaan loo qaybiyo dhinacyada ay quseyso. Hadana waxa intaa dheer in warqada lifaaqa ee Gudoomiyaha uu ku darey natiijo dheeraad ah oo ah inuu farayo Wasaarada inaan lagu fulin Xeer Nidaamiyaha ilaa inta dib u eegis ay ku sameynayan Wasaaradu.
10.	Ugu danbeyntii, dacwaddan dhinac kaliya ayuunba arji soo gudbistey, oo ah Guddidaa isku sheegay Waxbarashada Gaarka ah, wax laga diido iyo wax laga yeelaba waa laga dhigey, waxa cad inaan dhinaci kale loo yeedhin, isla markaana aan la siin wax fursad ah oo ay kaga jawaaban waxyalaha lagaga cabanayo. Taasina waa mid ka hor imaneysa danta cadaalada “principles of Natural justice” iyo Qodobka 28 ee Dastuurka Qaranka JSL.
Warqada Lifaaaqa ee Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ku faafinayo Qaraarka Maamulka